विवादमा पर्यो टिकाथलीमा भुत आतंकको कुरा !यस्तो छ नालीबेली ! (भिडियो सहित) -
हुन त काठमाडौं उपत्यकामा धेरै शिक्षित नागरिक बस्छन् । यहाँ सभ्य र विकसित सभ्यता छ । अत्याधुनिक प्रविधि नियन्त्रित जस्तै छ काठमाडौं उपत्यकाको दैनिकी । तर पनि यो शहरको पहिचाहन बनेका जे जति परम्परा जिवित छन् ति सँगै यहाँ उति नै अन्धविश्वास जकडिएको छ । त्यसैका ज्वलन्त उदाहरण हो, काठमाडौं उपत्यकाका टिकाथलीमा रहेको भूत घर ।
जहाँ मान्छे बस्नु त परको कुरा, घर मालिकहरु नै करोडौंको जायजेथा वेवारिसे छाडेर भूत नलाग्ने टाढाको बस्तिमा गएर बसिरहेका छन् । किनकी तिनका बाबुबाजेले जोडेको जमिनमा बनेका घरमा भूत नाच्छ । भन्छन्, भूतले मान्छे निल्छ र जर्बजस्ति गरेमा रगत छादेर मर्नुपर्छ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपालीपत्रका लागि सुजन पन्त र पुकार तिमल्सिनाले फिल्डमै गएर रिपोर्टिङ गरेका छौं ।
भूत भएको घरयो ललितपुरको टिकाथलीस्थित तीन तल्ले घर । यो घर यतिबेला खाली जस्तै छ । पछिल्लो दिन डेरामा बस्ने परिवार समेत अन्तै डेरा सर्न थालेका छन् ।
डेरा सर्नुको कारण हो– ‘भूत आतंक’ । यहाँ यस्तो घटना भयो जसले घरको साहु मात्रै नभएर वरपरका मानिसलाई समेत आतंकित बनायो ।राजधानीबाट नजिकै रहेको टिकाथलीस्थित एक घरमा करिब एक महिनादेखि भूतले तर्साएको भनेर केही दिनअघि एक टेलिभिजनबाट समाचार प्रसारण भयो । भूत आतंकको हल्ला भर्खरै मात्र चलेको हो ।
हल्ला चले लगत्तै त्यहाँ भीड मात्र जम्मा भएन वरपरकाले आ–आफनो पसल समेत बन्द गरेका छन् । भूत हेर्नको लागि भनेर थानकोट, जोरपाटीदेखि मान्छेहरु आएका छन् ।घरका व्यक्तिहरुले करिब एक महिनादेखि यो घरमा भुतले तर्साएको भनिएको छ । तर, यसको वास्तविक सत्यतथ्य बुझ्न नेपालीपत्रको टिम मंगलबार दिउँसो उक्त ठाउँमा पुगेको हो ।
भूत हेर्न आउनेको भीड
तीन तल्ले सेतो घरको आसपासमा मान्छेहरुको भीड छ । त्यो भीड हो ‘भूत’ हेर्न आउनेहरुको । समाचार प्रसारण गरेपछि टाढाटाढादेखि भूत हेर्न आउनेहरुको संख्या बढ्दो रहेको एक स्थानीयले बताए ।
घरमा रहेको सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, सिसा फुटाउने जस्ता कुराले समाचारको मुख्य हेडलाइन बन्यो । समाचार प्रसारण भएपछि तपाईं हामीलाई नि भूतको विषयमा चासो बनेको छ ।
प्रत्येक घरका बालबालिकाहरु डराउन थालेका छन् । त्यही पनि राजधानीमा भूत भन्दा । खाली रहेको घरमा सामान यताउता फाल्ने, सिसा फुट्ने जस्ता कुराले अच्चमित तुल्याउनु स्वभाविक पनि हो । सामान कसले फ्याँकेको भनेर बुझ्दा केही पनि नभेटिएको घरबेटी बताउँछन् ।
घरबेटीको ‘रुढ’ व्यवहार !
यतिबेला त्यहाँका स्थानीयहरु घरबेटीदेखि रुष्ट छन् । भुत भनेर प्रचारमा ल्याइएको घरको सबैभन्दा माथिल्लो तल्लामा बसेर उनीहरु तल मान्छेको भीड हेर्दै रमाइरहेका छन् । बारम्बार मिडियालाई बोलाएर प्रसारण गरिएको समाचारको सत्यतथ्य बुझ्न जाँदा यतिबेला मिडियालाई पनि रोक लगाएको छ ।
प्रहरी प्रशासन बोलाएर तथानाम गाली गर्दै मिडियाको जिम्मेवारी हामीले रवि लामिछानेलाई मात्र दिएको भन्दै उल्टै उनीहरुले आक्रोश पोखेका छन् । च्यानल गेट खोलेर भित्र पसेका व्यक्तिहरुलाई प्रहरी प्रशासन बोलाएर बाहिर निकालिएको हो ।
स्थानीयहरुले सस्तो प्रचारबाजीको लागि घरबेटीले यस्तो गरेको बताएका छन् । ‘यदि भूतले त्यस्तो गरेको हो भने हामीलाई भित्र पस्न किन दिइएन् ?’ आक्रोशित स्थानीय तथा समाजसेवी राम बहादुर श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
समाजका सभ्य र बुझे जानेकाहरु समेत भन्छन् भूत, सेतो वा कालो पहिरन लगाएर आउँछ, उल्टो खुट्टा पारेर हिँड्छ । सामान फाल्छ । राति ओछ्यान नै बोकेर दोबाटोमा लैजान्छ । घर वरिपरि अनौठो कम्पन ल्याउँछ । एक्लै भेट्टायो भने मान्छेलाईं कुट्छ अथवा डरलाग्दो आवाज निकाल्छ ।
उसो भए, के भूत साँच्चकिै यस्तै हुन्छ त ? प्राचीन सभ्यतादेखि पुराना खण्डहरमा भूत बस्ने गरेको थुप्रै कथा छन् । तर, भूत देखेको ठोकुवा गर्ने कोहि पनि छैनन् । परम्परागत धारणा र जनविश्वास अनुरूप मृतात्मालाई भूत भन्ने गरिन्छ ।
अंग्रेजी लेखक स्यामुअल जोन्सन भन्छन्, संसारको रचना भएको हजारौं वर्ष बितेपनि आश्चर्यजनक ढंगले भूतको अस्तित्व मानव मस्तिष्कमा यथावत् छ । मृत्युपछि कुनै व्यक्तिको आत्मा देखिएको एउटै उदाहरण छैन त्यही भएर पनि भूत हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषय विवादित छ ।
भूतबारे यस्तो छ नालीबेली ?
मिडियामा समाचार आएको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘भूत आतंक’ ले निकै चर्चा पायो । भूत हो कि होइन भन्नेबारे हामीले स्थानीयसँग कुराकानी पनि गर्यौं । प्रहरी प्रशासनले त्यहाँ भीड भएका मान्छेहरुलाई बाहिर निकालेकोलगायत यावत कुरा तलको भिडियोमा हेर्नुहोस् ।
Previous के तपाईको आँखाको वरिपरी चाउरीपना देखिन थालेको छ? अपनाउनुहोस् यी अत्यन्त प्रभावकारी उपाय
Next टाढाको रबि लामिछानेलाई बोलाउने भुतघरका घरबेटीले आफ्नै छिमेकीलाई घर भित्र छिर्न दिएनन, भुतसुत हैन रहस्य अर्कै रहेको छिमेकीको ठोकुवा (भिडियो)